I-Weeknd iphumelele iMbasa yoNyaka kumaBhaso oMculo we-Apple | Iindaba ze-iPhone
I-Weeknd iphumelele ibhaso lonyaka kwiiMbasa zoMculo zika-Apple
Apple Umculo uye waba ngaphezu a inkonzo yomculo kumlambo. Sele iluphawu ekufuneka iapile elikhulu lilukhathalele ukuze liqhubeke likhula. Kukho amagcisa amaninzi anikezela inxalenye yomxholo okhethekileyo kubabhalisi benkonzo, ukuvelisa uluntu kwiimvumi. Izolo abaphumeleleyo kwi IiMbasa zoMculo zikaApple, iimbasa zonyaka eziwongwa ngu-Apple kulo nyaka kuhlelo lwayo lwesithathu. Ophumeleleyo ekupheleni konyaka akakho ngaphezulu okanye ngaphantsi Iveki, ngelixa UOlivia Rodrigo uphumelele amanye amabhaso amathathu elona culo ligqwesileyo, icwecwe eligqwesileyo, kunye negcisa eliphumayo lonyaka.
UApple ubhengeza abaphumeleleyo kwiiMbasa zoMculo zikaApple
IiMbasa zoMculo ze-Apple ziwonga impumelelo yomculo kwiindidi ezintlanu ezihlukeneyo: uMculi woNyaka, uMbhali weNgoma woNyaka, uMculi oPhumeleleyo woNyaka, iNgoma eBalaseleyo yoNyaka, kunye necwecwe eligqwesileyo loNyaka, kwaye abaphumeleleyo bakhethwa ngenkqubo ebonisa. Zombini imbono yokuhlela yeApple Music njengoko ababhalisile kwihlabathi liphela bamamela kakhulu.
I-Apple yaziswa kwiminyaka emithathu eyadlulayo IiMbasa zoMculo zikaApple, ezinye amabhaso anikezelweyo kwinkonzo yayo yomculo wokusasaza ilandela imigca emibini yobuchule. Okokuqala, ukuphulaphula kwababhalisi kwinkonzo kwaye, okwesibini, imbono yokuhlela yenkonzo. Akukho ngaphezu qaphela umsebenzi, umzamo kwaye ufumane awona magcisa omculo abalaseleyo onyaka phantsi kwe-accolade eyaziwayo ukuba sisilutyana sesilicon esinqunyanyiswe phakathi kweshiti leglasi epolishiweyo kunye nomzimba owenziwe ngoomatshini kunye ne-anodized aluminiyam.
Ii-TV ze-LG Smart zifumana ngokusemthethweni i-Apple Music app
Kumacandelo aziwayo eeMbasa zoMculo zika-Apple kolu hlelo lwesithathu wongeza udidi olutsha lweembasa zeRegional Artist of the Year. Kolu didi, amagcisa amatsha anikezelwa kumagcisa abalaseleyo aphuma kwimimandla emihlanu: iAfrika, iFransi, iJamani, iJapan neRussia, kwaye ngokukaApple, “loo magcisa abenempembelelo enkulu kwinkcubeko nakwitshathi kumazwe awo eyaziwayo kunye nemimandla ".
Ngoko ke, Amabhaso alo nyaka aye ku:
Igcisa loNyaka: The Weeknd
Icwecwe loNyaka: uOlivia Rodrigo
Ingoma Yonyaka: U-Olivia Rodrigo
Igcisa eliqhawukayo: uOlivia Rodrigo (Iphepha-mvume lokuqhuba)
Umqambi woNyaka: HER
Igcisa loNyaka (eAfrika): Wizkid
Umculi woNyaka (eFransi): Aya Nakamura
Igcisa loNyaka (eJamani): RIN
Igcisa loNyaka (eJapan): I-DANDISM EYI-HIGE OFFICIAL
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Weeknd iphumelele ibhaso lonyaka kwiiMbasa zoMculo zika-Apple
I-Apple iyeka ukusayina i-iOS 15.1 kwi-iPhone 12 kunye ne-13
I-Apple inokugqitha i-Samsung kwisabelo semarike kwikota yokugqibela ka-2021